Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » INortal ifumana isigxina esincinci eTalgen
I-Nortal ingene kwisivumelwano esiqinisekileyo sokufumana inani labambalwa kuqaliso lokhuselo lwe-cyber Talgen ukomeleza amandla okhuseleko kunye nokuvula amathuba amatsha eYurophu, eMntla Melika, nakwi-GCC.
I-Talgen yinkampani yokhuseleko lwe-cyber egxile kwezokhuseleko kweziko nakwiimarike zokhuselo. Inkampani idala izixhobo kunye neenkonzo zemibutho ekhokelayo kwihlabathi ukuba izilungiselele ukulwa nokusongelwa kwe-cyber kunye nokuqinisekisa ukuqhubeka kweshishini.
Ngokuka-Msunguli we-Nortal kunye ne-CEO, u-Priit Alamäe, olu lutyalomali olucwangcisiweyo kwinkampani ukwandisa ubunkokeli bayo kwindawo yokhuseleko lwe-cyber, ebaluleke kakhulu kubathengi baseNortal abakhoyo nabatsha. "Oorhulumente nemibutho kwilizwe jikelele kufuneka bakulungele ukujongana nezisongelo ezintsonkothileyo ze-cyber, ke ngoko sibona imfuno kunye nethuba kule ntshukumo," utshilo u-Alamäe.
"Njengenxalenye yale ntsebenziswano, siza kwakha iqela elidibeneyo leengcali zokhuselo lwe-cyber kwaye sizisa ubuchule obuphuculweyo kubathengi bethu ukubanceda ukunciphisa izoyikiso kunye nokuphucula ukomelela," wongeze watsho uAlamäe.
"Njengokuba izoyikiso ze-cyber zibeka umngcipheko omkhulu kuyo yonke imibutho, ukhuseleko lwe-cyber lubhalwe phakathi kwezinto eziphambili kunye neenkxalabo zeenkokheli zemibutho kunye neebhodi," utshilo uMartin Ruubel, CEO weTalgen.
"Ukulahleka kwemibutho ejongene neziganeko ze-cyber kuyaqhubeka ukwanda-uqikelelo lwamva nje lubeka i-USD 6 trillion kwihlabathi liphela, kulo nyaka kuphela-ke ukubaluleka kokubanakho kombutho ukubuyisa ulwaphulo okanye ukungasebenzi kakuhle kubalulekile," wongeze watsho uRuubel.
NgokukaRuubel, oku kuthetha ukuba umsebenzi kaTalgen kule ndawo ibaluleke kakhulu kukuba netekhnoloji kunye nendlela yokuphucula ukomelela kwemibutho, ukuyenza ukuba ikwazi ukumelana nohlaselo kunye nokunciphisa ilahleko ukuba kwenzeka uhlaselo.
"Ndinovuyo lokuba yinxalenye yosapho olwandisiweyo lwaseNortal kwihlabathi liphela kwaye ndingene kolu bambiswano lobuchule ukuze ndisebenzise eyona mibutho mibini nokudibanisa izakhono zethu ukuvula amathuba amatsha," wongeze watsho uRuubel.